Ipact yaseToledo: Yintoni ekuvunyelwene ngayo kwaye yaphunyezwa nini | Ezezimali
IClaudi Casal | 28/07/2021 11:51 | Uqoqosho ngokubanzi
Kukangaphi sisiva malunga nePoledo Pact kunye nefuthe layo kwipenshini? Olu xwebhu kudala lulindelwe oluthathe iminyaka eliqela ukubhalwa, ekugqibeleni lwamkelwa ngo-Okthobha u-2020. Ingxelo yohlengahlengiso lwenkqubo yomhlala-phantsi equka izindululo ezingama-22 yenziwe ngamacandelo ezopolitiko. Ezi zezona zibalulekileyo ekuphumezeni inguquko yepenshoni ethembisiweyo ekudala ikho etafileni yengxoxo. Ayisiyiyo kuphela imibutho yezopolitiko eya kuthatha isigqibo ngotshintsho oluvunyiweyo, kodwa neemanyano zabasebenzi kunye nabaqeshi ngothethathethwano.
Ukucacisa yonke into ekuvunyelwene ngayo kwiToledo Pact kunye nokuba iyichaphazela njani ipenshoni, siza kwenza isishwankathelo esifutshane ngasinye sezindululo ezivunywe yiKhomishini yePalamente. Ukongeza, siza kuchaza owona mhla wokuvunywa kolu xwebhu. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga nePoledo Pact, qhubeka ufunda.
1 Yintoni ekuvunyelwene ngayo kwiTacto Pact?
1.1 Ingcebiso 0: Ukhuselo lwenkqubo yoluntu
1.2 Ingcebiso 1: Ukwahlulwa kwemithombo
1.3 Ingcebiso 2: Ukunyuka kunye ne-CPI
1.4 Ingcebiso 3: 'Ibhokisi yemali yomhlala-phantsi'
1.5 Ingcebiso yesi-4: Quote Freelance
1.6 Ingcebiso 5: Amaxesha orhwebo
1.7 Ingcebiso 6: Inkuthazo yengqesho
1.8 Ingcebiso 7: Ulwazi ngabemi
1.9 Ingcebiso 8: Ulawulo lwenkqubo
1.10 Ingcebiso 9: IiModyuli zoKhuseleko lweNtlalo
1.11 Ingcebiso 10: Ukulwa ubuqhetseba
1.12 Ingcebiso 11: Nobabini nenza igalelo kakhulu
1.13 Ingcebiso ye12: Ixesha lokuthatha umhlalaphantsi
1.14 Ingcebiso 13: Umhlolokazi kunye neenkedama
1.15 Ingcebiso 15: Inkqubo eyaneleyo
1.16 Ingcebiso 16: Iinkqubo zokuncedisa
1.17 Ingcebiso 17: Abafazi
1.18 Ingcebiso ye-17 bis: Ulutsha
1.19 Ingcebiso 18: Abantu abakhubazekileyo
1.20 Ingcebiso 19: Abasebenzi abafudukayo
1.21 Ingcebiso ye-19 bis: Ukudityaniswa kwamanani
1.22 Ingcebiso 20: Ulawulo lwePalamente
2 Wavunywa nini isivumelwano seToledo?
Yintoni ekuvunyelwene ngayo kwiTacto Pact?
I-Toledo Pact idume ngobuhlobo bayo nepenshoni, umba oxhalabisa uninzi lwabantu baseSpain. Phakathi kwamanyathelo awaziwayo abekwe yiKhomishini yePalamente yi ukugcinwa kwamandla okuthenga abo badla umhlala-phantsi ngokomthetho. Oku kuyahlaziywa ngonyaka ngamnye ngokusekwe kwi-CPI yokwenyani (Isalathiso samaxabiso amaThengi). Nangona kunjalo, zininzi ezinye iingcebiso ezenziwe yiToledo Pact, enyanisweni zingama-22 zizonke. Emva koko siza kwenza isishwankathelo esincinci somxholo ngamnye wabo.
Ingcebiso 0: Ukhuselo lwenkqubo yoluntu
Ukuqala uluhlu ngezincomo 0 ezinxulumene nokhuselo lwenkqubo kawonkewonke, iToledo Pact iyaqinisekisa ukuba iya kugcina ukuzibophelela kwayo ekugcineni kunye nokuphucula inkqubo yoLuntu yoKhuseleko lweNtlalo, inika ingqalelo ekhethekileyo kwinkqubo yepenshini. Umbono kukuba igalelo kwezentlalo liyaqhubeka ukuba ngowona mthombo osisiseko ngokwenkxaso yezemali yezibonelelo ezinegalelo. Ukongeza, iinkonzo zendalo iphela kunye nezibonelelo ezingafakwanga galelo ziya kuxhaswa ngezimali ngurhulumente kwi-Social Security.
Ingcebiso 1: Ukwahlulwa kwemithombo
Isivumelwano saseToledo sijolise ekupheliseni intsilelo ekhoyo yoKhuseleko lweNtlalo ngo-2023. Ukongeza, unyanzelisa ukubaluleka kokudlulisela kubemi ukuba inxalenye enkulu yeli tyala ngenxa yokucinga kweendleko ezithile ezingafanelekanga. Ngamanye amagama, bekungafanelekanga ukuba bahlawulwe ngemirhumo yokhuseleko kwezentlalo.
Sisiphi isisombululo esifunwa yikhomishini? Ngokutsho kwakhe, ezi ndleko zingafanelekanga kufanele ukuba babe luxanduva loHlahlo-lwabiwo mali lukaRhulumente Jikelele. Ngale ndlela ziya kuxhaswa ngezorhafu ngokubanzi. Le yimizekelo yoko kubandakanya:
Uncedo kwiinkampani ezifunyenwe ngenxa yokuncitshiswa kwegalelo loKhuseleko lweNtlalo.
Ixabiso eliphantsi, phakathi kwezinye izinto, lonyango olululo ngexesha locaphulo.
Izibonelelo ezinxulumene nokukhathalelwa komntwana kunye nokuzalwa.
Isongezelelo sokubeleka ngokubhekisele kwipenshini.
Ingcebiso 2: Ukunyuka kunye ne-CPI
Yintoni i-CPI? Isalathiso sexabiso sabathengi. Sisalathiso esilinganisa ukuba amaxabiso eempahla kunye neenkonzo ahluka njani ngexesha elithile kwindawo ethile. Kule meko, bekusele kukho isivumelwano sokuqala sika-2018. Le ndlela yokuhlaziya ipenshini evunywe nguRajoy ibangela ukonyuka konyaka nge-0,25%.
Isivumelwano iToledo siphinda kwisindululo saso sokuzikhusela koku kulandelayo: ikamva ". Ikwacacisa ukuba nakuphi na ukunyuka kwepenshini okungaphezulu kwe-CPI kufanele kuxhaswe ngentlawulo yezinye izibonelelo zemali ayihambelani noKhuseleko lweNtlalo.
Ingcebiso 3: 'Ibhokisi yemali yomhlala-phantsi'
Omnye umba ekuthethwa ngawo kwiToledo Pact yile ibizwa ngokuba yibhokisi yemali yomhlala phantsi, ebhekisa kwiReserve Fund. Ngexesha lokugunyazwa kukaRajoy, oku kwaxothwa ngama-90%. Ngokukhawuleza ukuba ibhalansi yeakhawunti yoKhuseleko lweNtlalo ifunyenwe, Isivumelwano saseToledo sicebisa ukuba intsalela yemirhumo ifakwe kwakhona kwiNgxowa-mali enguVimba kwaye iseke intsalela esezantsi kuyo.
Ukongeza, ichaza ukuba le ngxowa-mali ayisebenzisi ukusombulula ukungalingani kwezezimali endalo eyakhekileyo. Nangona kunjalo, ewe kunokuba njalo uncedo olubalulekileyo xa kufikwa ekusombululeni ukungalingani kwemjikelo ezinokuthi zenzeke phakathi kweendleko kunye nengeniso evela kuKhuseleko lweNtlalo.
Ingcebiso yesi-4: Quote Freelance
Malunga nokukhuselwa kwezentlalo ngabantu abaziqeshileyo, iToledo Pact icebisa ukuseka amanyathelo avumela umhlala-phantsi kwangethuba kwaye nawo asebenze isigxina. NgokweKhomishini, ukuzinza kwepenshini kufuna oko Igalelo labo bazisebenzelayo lisondela kumvuzo wabo wokwenene ngokuthe ngcembe. Nangona kunjalo, uthi le ngongoma kufuneka ixoxwe kunye nabaqeshi kunye neemanyano zabasebenzi.
Ingcebiso 5: Amaxesha orhwebo
Ingcebiso yesi-5 ijongene namaxesha orhwebo. Ngokuphathelene noku, iminyaka eli-15 igcinwa njengelona thuba lisezantsi lokufaka ukuze ukwazi ukufikelela kwipenshoni yoKhuseleko lweNtlalo kunye nokwandiswa kwayo okuqhubekayo ukuya kwiminyaka engama-25. Nangona kunjalo, njengenoveli ibandakanya iToledo Pact Abantu banokukhetha loo minyaka ingama-25 ngendlela yokuba bathandwe ngakumbi Ngexesha lokuthatha ipenshini.
Ngokumalunga nabantu abaphila ixesha elide, isisombululo esibonelelwa yiKhomishini yile Banokulahla unyaka othile okanye bakhethe icandelo lomsebenzi wabo wokurhweba ukubala ipenshini.
Ingcebiso 6: Inkuthazo yengqesho
Ngokumalunga nokuxhaswa ngezimali kwenkuthazo yengqesho, iToledo Pact inyanzelisa oko azinakwenziwa ngentlawulo kwimirhumo yoluntu. Ngesi sizathu, icebisa ukuba kufuneka zisetyenziswe njengesixhobo esikhethekileyo kwaye kumaqela nakwiimeko ekufuneka zithandwe, ezinje ngabantu abakhubazekileyo okanye abasemngciphekweni wokuvalelwa ekuhlaleni, abangasebenziyo abangaqeshwanga ixesha elide kunye namaxhoba ubundlobongela, isini, umzekelo.
Ingcebiso 7: Ulwazi ngabemi
Ingcebiso yesi-7 kulwazi lwabemi ikhuthaza uRhulumente ukuba athobele uxanduva lwayo lolwazi oluchazwe kwinqaku le-17 loMthetho Jikelele woKhuseleko lweNtlalo. Le ndlela, umntu ngamnye kubemi baseSpain uya kuba nakho ukufikelela kulwazi lwamaxesha ngamaxesha kunye noluntu malunga namalungelo abo epenshoni.
Ingcebiso 8: Ulawulo lwenkqubo
Isindululo senziwe malunga nolawulo lwenkqubo yoKhuseleko lweNtlalo uqobo. Ngokwe-Toledo Pact kukho imfuneko engxamisekileyo yokuqinisa, yokufumana kwakhona kunye nokuhlaziya abasebenzi kuze ke ngaloo ndlela kufikelelwe kulawulo olunempumelelo nolusebenzayo.
Ingcebiso 9: IiModyuli zoKhuseleko lweNtlalo
Iinkampani zeinshurensi ezihambelanayo ezinxulumene noKhuseleko lweNtlalontle nazo ziyavela kwiToledo Pact. Malunga nabo, ingcebiso icebisa oku kulandelayo:
Thobela umthetho wokulingana ngokubhekisele kumabhunga olawulo ayo.
Banike isixa esithile sokuguquguquka malunga nokusetyenziswa kwezixhobo zayo, kodwa kufuneka ihambelane nolawulo olungqongqo olwenziwa nguKhuseleko lweNtlalo.
Ukuphucula ukusetyenziswa kwezixhobo kunye namava, ngakumbi ngokubhekiselele kwiinkonzo zomothuko.
Ingcebiso 10: Ukulwa ubuqhetseba
Umcimbi obalulekileyo kwilizwe lethu ubuqhetseba. Isivumelwano seToledo sinyanzelisa ukubaluleka kwe yomeleza umlo wokulwa ubuqhetseba, ekwaphembelela uKhuseleko lweNtlalo. Ukulungiselela le njongo iphakamisa izisombululo ezibini:
Cacisa izikhewu zomthetho (Oku kuyakuthintela, umzekelo, iimeko zabasebenzi abazisebenzelayo).
Khaphukhaphu ulawulo lwezohlwayo kwezo nkampani zingahambelani noxanduva abanalo malunga noKhuseleko lweNtlalo.
Ingcebiso 11: Nobabini nenza igalelo kakhulu
Ingcebiso nge-11 ijongene negalelo. Ngamanye amagama: ubudlelwane phakathi kwesixa senzuzo kunye neenzame zegalelo lomsebenzi ngamnye. Ngokusisiseko bayaphinda bayanyanzelisa ukuba, ngokuphelisa iminyaka okanye ukukhetha ixesha, abantu banokuthandwa xa kufikwa kumba wokuthatha ipenshoni. Ngale ndlela, abo bachatshazelwe yingxaki yokugqibela kanye ekupheleni kobomi babo bokusebenza, ipenshini yabo ayisoze yohlwaywa.
Ingcebiso ye12: Ixesha lokuthatha umhlalaphantsi
Ngokubhekisele kubudala bokuthatha umhlalaphantsi, IKhomishini iyakhusela ukuba oku kufanele ukuba kube kufutshane kangangoko kwiminyaka yobudala yomhlalaphantsi emiselwe ngokusemthethweni. Ukufezekisa oku, kufuneka ngokuzithandela wandise ubomi bakho bokusebenza, ungaphezulu kweminyaka yobudala yomhlalaphantsi. Ngapha koko, iToledo Pact inyanzelisa abasemagunyeni ukuba baqwalasele iimeko zokuba sesichengeni ezinokubangelwa ngamaqela athile. Olunye unyanzeliso lwePact kukuba ukufikelela kumhlala-phantsi kwangaphambi kwexesha kufuneka kuphononongwe ukuze kuncitshiswe ii-coefficients zihlala zilingana.
Ingcebiso 13: Umhlolokazi kunye neenkedama
Amalungelo omhlolokazi kunye neenkedama aya kuqhubeka nokuba negalelo, kodwa iKomishini iphakamisa oko lungelelanisa ipenshini nosapho kunye neemeko zokwenene zentlalo kunye neemeko zentlalo noqoqosho zabantu abaxhamlayo. Ngale ndlela izama ukuphucula ukukhuselwa kwabo badla umhlala-phantsi abangenazo ezinye izixhobo. Kubantu abangaphezu kwama-65 abafumana ipenshoni yomhlolokazi, iToledo Pact ithathela ingqalelo ukuba ipesenti yesiseko solawulo kufuneka inyuswe, kuba yeyona nto iphambili kuyo. Ngokubhekisele kumhlala phantsi wenkedama, ucebisa ukuba aphucule, ngakumbi isixa.
Ingcebiso 15: Inkqubo eyaneleyo
Kwisindululo se-15, iKhomishini iyakhusela ukuba inkqubo yomhlala-phantsi yoluntu kunye nokusekwa ngokwaneleyo kokufanayo kuyaxhasa. Ukuzalisekisa le nkcazo, ibona kufanelekile ukuseka izalathiso ezithile ezifanelekileyo, ezinje ngezinga lokutshintsha. Oku kunxulumene nomndilili wepenshoni kumvuzo ophakathi wabo bonke abasebenzi. Ke, ukubekwa esweni okuqhubekayo kwendaleko kunokwenziwa, kwaye kwimeko yokuphambuka kuya kuvumela ukwamkelwa kwamanyathelo athatyathwa njengokufanelekileyo. Yintoni egqithisile, IKhomishini iyakuxhasa ukugcina ubuncinci bezixa zepenshini kwaye ukuba izongezo kolu buncinci kufuneka zithathelwe iirhafu, oko kukuthi, luHlahlo-lwabiwo mali lukaRhulumente Jikelele, endaweni yegalelo kwezentlalo.
Ingcebiso 16: Iinkqubo zokuncedisa
Isivumelwano saseToledo sicebisa ukumiliselwa kwezicwangciso zepenshini, ngakumbi ezo zomsebenzi. Oku kufuneka kungabinangeniso kwaye ngolawulo olwahlukileyo lwezomthetho nolwezemali. Oku kuyakuphucula ulawulo lwangoku kwaye kuthintele ezi nkqubo zokonga ekubeni zithathelwe ingqalelo njengemveliso yezemali.
Malunga neenkqubo zomhlala-phantsi ezizodwa, iToledo Pact inyanzelisa ukuba ezi kufuneka zicace gca. Ngale ndlela, iindleko zolawulo azinakuthetha ukubuya okungalunganga kwabasindisa.
Ingcebiso 17: Abafazi
Ingcebiso ethile yabasetyhini ayinakulahleka. IKhomishini ifuna Ukuqinisekisa ukulingana emsebenzini nakwiipenshoni. Oko kukuthi: Iyaqonda ukuba namhlanje kusekho izikhewu zesini. Ukuze ulwe nabo, iPoledo Pact iphakamisa oku kulandelayo:
Sombulula umba wokhathalelo ukuze amakhondo obugcisa abo bonke abo banabanye abaxhomekeke kubo abaphetheyo sukuvelisa izikhewu ngenxa yesi sizathu.
Ukuphucula ukusebenzisana usebenzisa izixhobo ezithile, ezinje ngeemvume zabazali.
Yenza amanyathelo avumelayo zichonge ucalucalulo lwemivuzo.
Ngenisa uhlobo lolungiso ukugcwalisa izikhewu kuluhlu lwemisebenzi ezo zibangelwa kukungahambi kakuhle kwimisebenzi yobungcali, njengokuqeshwa ekhaya.
Phumeza uhlengahlengiso olinjongo zalo unyango olululo lokucalucalula nabantu bexeshana.
Ingcebiso ye-17 bis: Ulutsha
Kubantu abancinci, iToledo Pact iyabuza ukuba iimeko abasebenza phantsi kwazo ziphuculwe. Le yindlela izama ukukhulisa ukuzithemba kweli qela kwinkqubo yoKhuseleko lweNtlalo. Ukuza kuthi ga ngoku, icebisa ukwamkelwa kwamanyathelo omthetho aqinisekileyo anjongo yawo ingekuko ukuqinisekisa kuphela, kodwa kunye nokuphucula ukukhuselwa kwezentlalo kwabo babambe izifundiswa.
Ingcebiso 18: Abantu abakhubazekileyo
Malunga nabantu abakhubazekileyo, iToledo Pact ithi Onke amanyathelo anjongo yawo ikukususa imiqobo ukuze aba bantu bakwazi ukufikelela kwimisebenzi efanelekileyo kufuneka iqiniswe.. Ngesi sizathu, inyanzelisa ukuba umthetho kufuneka ukhuthaze ukugcinwa kwemisebenzi yobungcali yabantu abakhubazekileyo kwaye iququzelele ukubandakanywa kwabo.
Ingcebiso 19: Abasebenzi abafudukayo
Enye ingcebiso ngePoledo Pact yile ukuthanda ukubakho kwabaphambukeli abasemthethweni. NgokweKhomishini, ezi zomeleza inkqubo yomhlala phantsi, kuba abantu baseSpain bayaluphala. Umbono wakhe kukudala iindlela ezibandakanya abaphambukeli kwimakethi yezabasebenzi. Sebenzisa eli cebo ukwazisa ukuba uLawulo kufuneka luqinise iinzame zalo zokuthintela ubuhlanga, ucalucalulo kunye nokuxhaphaza emsebenzini.
Ingcebiso ye-19 bis: Ukudityaniswa kwamanani
Nangona ukwenziwa kwedijithali kungenakuphepheka kweli xesha siphila kulo, iToledo Pact ilumkisa ukuba inokuchaphazela uku-odolwa kobudlelwane babasebenzi kunye nolungelelaniso lomsebenzi. Bagxininisa ukuba kubalulekile thanda ukubandakanywa kwabo bonke abasebenzi kwinkqubo. Ngale ndlela, kucetyiswa ukuba kuliwe uqoqosho olungekho sikweni kunye nokuqinisekisa ukukhuselwa kwiimeko ezinesidingo.
Kwelinye icala, iKhomishini iyaqaphela ukuba kukho umngcipheko wokwenyani wokuba igalelo kukhuseleko lwentlalo aluyi kwanela. Kungenxa yokuba ubudlelwane bezabasebenzi beqonga ledijithali zihlala ziphakathi kwaye zingena manqaphanqapha. Ngesi sizathu, icebisa ukuba iindlela eziqwalaselwe njengezinganikeliyo kufuneka zomelezwe. Ukulwa nokuncitshiswa kwengeniso yoKhuseleko lweNtlalo ebangelwe kukufakwa kwikhompyutha, iToledo Pact inyanzelisa ukuxhomekeka ngokuchanekileyo kwiminikelo yentlalo, okoko imeko enemveliso kunye nenani labantu itshintshile kakhulu kumashumi eminyaka adlulileyo.
Ingcebiso 20: Ulawulo lwePalamente
Okokugqibela bathetha ngolawulo lwepalamente. Kulo msebenzi, IKhomishini yoHlolo noVavanyo lweziVumelwano zeToledo zimiselwe ngokusisigxina kwaye uRhulumente kufuneka ayazise minyaka le ngemeko abakuyo uKhuseleko lweNtlalo. Isivumelwano saseToledo sinyanzelisa ukubaluleka kokuqinisa ukubekwa esweni kweziphumo ezifunyenwe kumlo wokulwa ubuqhetseba, imali eseleyo yenkqubo kunye nokwanela kwepenshini.
Wavunywa nini isivumelwano seToledo?
Emva kweentlanganiso ezithathe ngaphezulu kweminyaka emine, Ekugqibeleni, into ebizwa ngokuba yiToledo Pact yavalwa nge-23 ka-Okthobha ka-2020. Kuthathe uthethathethwano oluninzi kwikhomishini yasepalamente ukuze ekugqibeleni ifezekise injongo yayo: ukwenza isikhokelo kwinkqubo yomhlala-phantsi yoluntu. Bazokuvuma izincomo ezingama-22, kodwa iToledo Pact ikhumbule ukuba kwiminyaka emihlanu emva kokuvunywa kwayo, “iCongress of Deputies kuyakufuneka iqhubeke novavanyo ngokubanzi lwezindululo ze-Toledo Pact, kunye novavanyo yenqanaba lokuthobela, kusetyenziswa izixhobo ezithile zepalamente ukulungiselela le njongo ”.
Ndiyathemba ukuba ngoku ucacile malunga nayo yonke into eqondwa yiPoledo Pact, ubuncinci ngokufutshane. Ungandishiya uluvo lwakho kwizimvo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ipact yaseToledo